Abantu abaninzi banokuphila ubomi, kuba umsebenzi wabo udibene nokuhlala kwikhompyutha. Umntu ngokuthe ngcembe uzuza ubunzima, ngamanye amaxesha akangabonwa ngumntu. Ukuze ugweme oku, kufuneka uhlanganyele kwimisebenzi yomzimba, kodwa akulula. Ukuba uhamba ngeveki, kodwa usebenza kwisigqi esifanayo, awukwazi ukulondoloza imeko. Ekubeni usuku ludla iikhalori ezimbalwa. Ukuphila ngokuzigcina kunokukhokelela ekutyebeni.
Kwaye ukuba ufanele uhlale kwindawo yokusebenzela yonke imini, kufuneka ufune iindlela zokuqalisa umsebenzi ngexesha leeyure zokusebenza. Ukuba uchithe ixesha elithile kwintsebenzo ethile, uhamba, uye kwii-movie, waza wachitha ezininzi iikhalori waza wadla. Ukunciphisa inani leentshukumo, uyangenisa ukutya okudala.
Ungayi kubuyiselwa njani ngomsebenzi osondezayo?
Khawucinge nje ngephampodi, amanzi awela kuyo kwaye emva kwexesha ezininzi iilitha zamanzi ziqokelelwa. Imeko efanayo iyenzeka ngokusetyenzwa kobunzima obuninzi, awuqapheli ukuba utolo lwakho lwezikali lubonisa ukuba ufumene kwakhona. Ukuba udla amantongomane amnandi, ayinakuphazamisa umzobo, kodwa ukuba la manqoma ahlafuna ngaphandle kokuphazanyiswa, baya kukwazi ukongeza ezininzi iikhalori ezingagqithwanga.
Ukutshisa iikhalori ezingaphezulu, kufuneka uhambise ngaphezulu kunye nomsebenzi ohlala. Ukwandisa inani leentshukumo kwiofisi. Umzekelo, kufuneka uhlolisane nomnye osebenza naye kwisebe elingummelwane, uye kuye, kwaye ungabizi. Xa uthetha kwifowuni, hamba ngeenxa zonke iofisi. Hlala phantsi xa kufuneka ukhangele kwesikrini sesithathu okanye xa ufuna ukubhala okuthile. Indawo yodwa ongeke uhambe kuyo ngumatshini othengisa iikrunches kunye neetchips.
Sebenzisa amandla amaninzi
Nayiphi na imisebenzi ibalulekile ekudleni ubomi. Musa ukugcina amandla xa kukho ithuba. Kwaye kulula ukwenza: ungatshintshi iziteshi zeTV kwi-remote control, kodwa yenza kuTV, ungasebenzisi i-elevator, kungcono ukukhuphuka uze uhlawule. Xa ubukela iTV, unokongeza iikhigram ngokungafaniyo. Ungadli ngelixa usebenzisa i-pauses advertising. Yaye ukuba ufuna ukusela itiye okanye i-snack, ke uye ekhitshini, hamba ngaphezulu.
Ukungabi ngcono ngomsebenzi wokuhlala
Nangona kuzwakale, kodwa kulungile. Ukunyuka okuncinci, amandla angaphantsi kwamandla asetyenziswayo, iikhalori ezingaphantsi ozifunayo. Isisu sisetyenziswe kwisixa esithile sokutya, awukwazi ukuba uqaphele ukuba akukho mfuneko yokutya okwi-calorie ephezulu kunye nokutya okumanzi. Kuphela emva kwexeshana, utshintsho kwisondlo luya kuziva, kwaye ube ngumkhwa.
Ukunyuka kwesisindo kunokurhoxisa iimveliso ze-carbohydrate. Kubalulekile ukunciphisa ukusetyenziswa kwabo kwaye badle imifuno kunye neziqhamo. Isixa sokutya siya kuhlala silingana, uya kuba nomuva wokuhlalisa, kunye nomxholo wekhalori uya kuncipha.
Kubalulekile ukunciphisa amaxesha okutya kokutya. Ngokomzekelo, ukuba usetyenziswe ukutya amaxesha amahlanu ngosuku, unokunciphisa ukutya kokutya ukuya kumaxesha amathathu. Unokwenza ngoku lula kule nto.
Sebenzisa onke amathuba okuhamba
Ukuba indawo yokusebenzela isemva kwekhompyutheni, unokwenza isidlo sasemini ngexesha lesidlo sokuhamba. Le mizuzu eyi-15 iya kukuvumela ukuba uphumule, ujonge kwaye ufumane umoya omtsha.
Ukuba indlu yakho okanye iofisi ingaphezulu kwepansi yesithathu, kuhle kakhulu. Uya kuba nethuba lokuzibandakanya. Musa ukusebenzisa i-elevators, nangona ukukhuphuka nokuhla kwexesha elide, kodwa oku kunokunciphisa ubomi bakho bokuhlala.
Ngexesha lakho lokuzonwabisa, hamba ukuhamba. Yenza isisombululo esilula, ngoko unokucima isidumbu somzimba wakho wokuhamba.
Ekugqibeleni, songeza ukuba xa uhleli phantsi, kubalulekile ukuba ungabuyiselwa. Unako ukugcina ubunzima kuyo nayiphi na imimiselo, konke kuxhomekeke kumnqweno wakho. Kulula ukuthatha ulawulo lomlinganiselo wokuzilolonga nokutya. Oku kuya kusindisa isibalo, ukuqinisa uxanduva lokuphila kunye nempilo yabo. Unako ukukhupha inani lemali echithwayo kunye nokusetyenziswa kweekhalori, ubunzima bakho buya kuncipha.
Indlela yokucoca i-suede ekhaya?
Baqhatha njani kwiivenkile?
Ukumiswa kweCake: 8 Iingcamango eziMangalisayo
Izakhono zobuchwephetha kuthetha ukunakekelwa kwezicathulo
Indlela yokwelula ijeans: iindlela ezisisiseko
Unokunyamekela njani umyezo wezityalo
Indlela yokucoca iengubo zeegusha ekhaya
Yintoni iRibhoni yaseSt. George? Indlela yokudweba nokukhawulelana kakuhle isaphetha
Isisu somzimba ngexesha elifutshane
Ukukhuselwa kwabantwana endleleni
Ikhalenda yeMbewu kaLunar ngo-Ephreli 2017: Ithebhile ngeentsuku ezilungileyo
I-fletlet ye-Chicken kunye ne-pasta kunye neentsimbi
U-Igor Nikolaev wabonisa umfanekiso wesapho ochaphazelayo
Yintoni ikati ifanekisela kwiphupha?
Iikhogetti kwiitamatato ebusika
Ukulinda i-vivacity: njani ukugcina ikhofi ekhaya?
Cocktail kunye nomango
Indlela yokwenza isiqulatho seehocolates ngezandla zakho
Iibhokhwe kunye nenyama kunye namakhowe
Umntwana wakho osemncinci wawela ngothando!
Casserole nge ricotta kunye nesipinashi